‘संक्रमणकै डरमा अस्पतालको सेवा बन्द गर्न हुन्न’ – Health Post Nepal
२०७७ साउन ३० गते १८:३२
पछिल्लो समय कोरोना भाइरस( कोभिड–१९) रोकथाम तथा उपचारमा फ्रन्टलाइनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण बढ्दै गएको छ। जसका कारण अस्पताल सिल हुने र सेवा बन्द हुने क्रम बढेको छ ।
अस्पतालका विभाग सिल तथा बन्द गर्दा हजारौँ बिरामी उपचार गर्न अधिकारबाट वञ्चित भइराख्नु परेको छ। अस्पताल व्यवस्थापन तथा शुल्कका विषयमा हेर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख नै दायित्व हुन्छ ।
कोरोना संक्रमण नसर्नेको लागि स्वास्थ्यकर्मीले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सावधानी नअपनाउँदा र व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई)को उपलब्धता र सही प्रयोगको अभावले पनि संक्रमण अस्पतालमा बढ्दै गएको छ।
अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई अनावश्यक रुपमा भेटघाट गर्दा भीडभाड बढ्न गई संक्रमण बढ्न थालेका छ। वैश्वीक महामारीका सन्दर्भमा महामारी सुरु भएपछि नेपालमा पनि सुरुदेखि नै परीक्षणको दायारा बढाउका लागि आवाज उठाइरहेका थियौ। तर, बल्ल बल्ल अहिले कार्यन्वयनमा आएको छ।
अस्पतालमा हुने संक्रमण रोक्नका लागि परीक्षण गरेर मात्र अस्पताल छिर्ने पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। अस्पतालभित्र पनि स्वास्थ्यकर्मीले पनि प्रयाप्त सावधानी अपनाएको पाइएको छैन।
कसलाई संक्रमण छ भन्ने अनुहारले बताउँदैन। हाल लक्षण भएका संक्रमितको संख्या बढ्दै गएका छ । त्यसकारणले पनि स्वास्थ्यकर्मीले आफ्ना–साथीभाईसँग नजिकको सम्पर्क राख्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । संक्रमणलाई हेल्चेक्र्याँइ गरेर स्वास्थ्यकर्मीहरु समेत खाना खाँदा टासिँएर बस्दै आएका छन्।
शंका नभएका बिरामीलाई हेर्दा पनि स्वास्थ्यकर्मीले प्रर्याप्त रुपमा प्रिकसन अपनाउनुपर्दछ। यस्ता विभिन्न कुराको ख्याल नगर्दा एक जनामा संक्रमण देखियो भने ५० जना स्वास्थ्यकर्मी आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइनमा जानु परेको स्थिति आएको छ।
अहिले कोरोनाको डरले केहि अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने प्रवृत्ति बढ््दै गएको छ। संक्रमणको डरले अनावश्यक रुपमा अस्पतालको सेवा त बन्द गर्न भएन नि!
यसको प्रत्यक्ष असर आकस्मिक रुपमा उपचार गर्नुपर्ने बिरामीले धेरै अस्पताल चहार्नु परेको छ। केहि बिरामीको मृत्यु भएका घटना दिन–प्रतिदिन घटिरहेको छ।
जरुरत पर्ने हो भने सेवा नै रोक्नुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीबाट अन्य व्यक्ति वा बिरामीमा संक्रमण सार्ने स्थिति आउन दिनु हुँर्दैन। स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइभई काम गराउनु हुन्न । तर, कतिपय ठाउँमा सञ्चालन गर्नसक्ने सेवा पनि डरको भर नै बन्द गर्न थालिएको छ।
लामो समय स्वास्थ्यकर्मीको परीक्षण वा कन्ट्रायक ट्रेसिङ गर्नका लागि अस्पताहल सेवा बन्द गर्न भएन। त्यसको लागि पहिला देखि नै जनशक्तिको व्यवस्थापन चुस्त रुपमा गर्नु पर्छ। अस्पताल सेवा ठप्प हुँदा हजारौँ सर्वसाधारणले दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्य गरौं ।
(डा. कोइराला नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष हुन्।)